Nagarik Shukrabar - ‘सप्तरंगपछि पञ्चेबाजाको कन्सर्ट गराउँछु’
शनिबार, ३० कार्तिक २०७६, ०० : ४३
‘सप्तरंगपछि पञ्चेबाजाको कन्सर्ट गराउँछु’
सोमबार, ०७ माघ २०७५, ०३ : १९ | शुक्रवार
गृष्मा इन्टरटेन्मेन्ट माघबाट सात प्रदेशमा संगीत र खेलमार्फत् सद्भाव बढाउन सप्तरंग कार्यक्रममा जुटेको छ । सोही कार्यक्रम केन्द्रित रहेर आयोजक गृहेन्द्र घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीः
सप्तरंग म्युजिक भनेर सातै प्रदेशमा लादै हुनुहुन्छ ? कलाकारको चयनको आधार के हो ?
प्रदेशमा कार्यक्रम सद्भावको हिसाबले लाँदैछौँ । यसको तयारी पनि पूरा भइसक्यो । कलाकारको स्टारडम र प्रदेशमा प्रभावको आधारमा चयन गरेका हौं । सद्भाव अभियान भएकाले प्रदेशअनुसारै कलाकार छनोट गरिएको हो । जस्तो प्रदेश नम्बर १ बाट प्रमोद खरेल, २ नम्बर प्रदेशमा सन्दीप क्षेत्री, ३ बाट रामकृष्ण ढकाल, ४ बाट पशुपति शर्मा, ५ बाट इन्दिरा जोशी र ६ बाट अञ्जली अधिकारी भनेर चयन गरेका थियौँ तर उहाँ ५ नम्बर प्रदेशमा नै पर्नुहुने रहेछ । ७ बाट दीपक बिष्ट हुनुहुन्छ ।
कार्यक्रममा गीतसंगीत मात्रै हो कि अन्य केही पनि छ ?
स्थानीय रहनसहन र कल्चरलाई फोकस गरेर कार्यक्रम गर्छौं । त्यसका लागि सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसँग छलफल भइरहेको छ । सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यो भयो भने संगीतसँगै कल्चरलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछौं ।
कलाकार बोकेर हिँडेर मात्र सद्भाव बढ्छ त ?
सद्भाव बढाउने माध्यम भनेकै कला, संस्कृति र खेल त हो ! कलाकार र खेलाडीले त हो सद्भाव बढाउने । त्यसैले त हाम्रो अभियानमा कलाकार पनि हुनुहुन्छ, खेलाडी पनि । यसको जत्तिको प्रभाव अरु कसको हुन्छ र ? जब मीठो संगीत बज्छ, सबै एकाकार भएर मग्न हुन थाल्नुहुन्छ । मन मन जोड्नु नै सद्भाव हैन र ?
कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य के हो ?
मुख्य लक्ष्य मनोरञ्जनमार्फत् सद्भाव नै हो ।
यो यही वर्ष मात्र हुने हो कि निरन्तरता पनि पाउँछ ?
निरन्तर हुन्छ । अर्को वर्ष यही बेलामा यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ । अर्को वर्षका लागि कलाकारसमेत चयन भइसक्नु भयो । गृष्मा इन्टरटेन्मेन्टले शुरु गरेको सबै कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
जापानमा मैले शुरु गरेको साकुरा नाइट कार्यक्रम दोस्रो हुँदै तेस्रो वर्षमा पुगिसक्यो । रोक्ने भन्ने हुँदैन । यसको संस्करण बढ्दै जान्छ ।
सप्तरंगको सबै कार्यक्रम निःशुल्क भन्नुभएको छ । कार्यक्रमको आर्थिक स्रोत के हो ?
प्रायोजकहरु हुनुहुन्छ । कार्यक्रमका लागि पुग्ने आर्थिक स्रोत जुटेकाले नै कार्यक्रम निःशुल्क गर्न लागेको हो ।
भावि योजना ?
अब लोप हुन लागेका पञ्चेबाजाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न मन छ । पुराना बाजा लोप भएका छन् । यति मीठो धुन निकाल्ने हाम्रो आफ्नै बाजाहरु छन् । ती सबै मिलाएर कन्सर्ट गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला । यो सप्तरंग म्युजिकल कन्सर्ट सकिएपछि यसको शुरुवात गर्नेछु ।
रियालिटी चेक: सनिशलाई फापेन लाइभ राउण्ड, रामको अभिनय, मक्ख रजनी
भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २ को लाइभ राउण्ड सनिश श्रेष्ठका लागि त्यत्ति फापेन। लाइभ राउण्डमा प्रतिस्पर्धीले प्रस्तुति दिँदै भोट माग गरिरहेका छन्। दर्शकले भोटिङका आधारमा अगाडि बढ्ने मोडमा पुगेका सनिशले गीतको बोलै बिर्सँदा कोचको गाली खाए।
फिल्म सरेरै हैरान
फिल्म रिलिज हुनै लाग्दा एकाएक फिल्म सरेपछि अभिनेत्री सुमी मोक्तानलाई पर्नु पीर परेको छ। यसै साता रिलिज हुने भनिएको फिल्म ‘सरौँतो’ मंसिर १३ मा पुगेपछि अभिनेत्री सुमी अहिले तनावमा छिन्।
लगनगाँठो कस्दै ऋचा
विवाहको मौसम आएसँगै अविवाहित अभिनेत्री होस् या अभिनेताको विवाहको चर्चा शुरु भइहाल्छ। कसैको चर्चामै सीमित हुन्छ भने कसैको जोडी बाधिइन्छ पनि।